Black Theme Launcher Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Black ကအဓိကအကြောင်းအရာတင်ပေးသူ
Black ကအဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကို APK ကို
Black ကအဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကို Download လုပ်ပါနှင့်ပျော်မွေ့!
သငျသညျက Black အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အခါသင်✱Whatရကြဘူး✱
သငျသညျက Android အဘို့ဤ Launcher ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ:
• ဖုန်းဆောင်ပုဒ်ကိုပြောင်း သင် HD ကို screenshots များထဲမှာမွငျနိုငျအဖြစ်ဤအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကူးအရောင်များ;
• app ကို icon တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ် သငျတို့သနှစ်သက်သောစတိုင်ကိုက်ညီရန်သင့်ဖုန်းပေါ်မှာသူတို့အားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်;
•ဖူး အကြီးအအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု သငျသညျမှရွေးချယ်နှင့်ဤ HD ကိုဖွင့်တင်ပေးရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်မူထသော,
• ယင်းဖောင့်ခြင်းနှင့်အရောင်ကိုပြောင်း ဒီအခမဲ့ဆောင်ပုဒ် Launcher ရဲ့ကြည့်ကိုက်ညီရန်။
★အခမဲ့ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Launcher ကိုဆောင်ပုဒ်ကို install လုပ်နည်း★
•က Black အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကို Download လုပ်;
•အဖွင့်သုံးစတင်ဖွင့်တင်ပေးဆောင်ပုဒ် app နဲ့ပွတ်ဆွဲကိုဖွင့်,
•သင်သည်သင်၏ screen ပေါ်မှာမြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းအတိုများနှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာ;
•သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပုံကိုဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ Launcher ကိုဆောင်ပုဒ် Customize; •သတ်မှတ်မည်ဖွင့်တင်ပေးသင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ် '' အဓိကအကြောင်းအရာ Activate 'နှင့်ပျော်မွေ့အဖြစ်!
Android အတွက်★ပိုကြောက်မက်ဘွယ် Launcher! ★
သင်သည်အခြားအံ့သြဖွယ် launcher ကို install လုပ်ဖို့လိုပါလျှင်✱, သင်တို့သည်ငါတို့၏ developer page ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုငျပါသညျ! ကျနော်တို့ Android အတွက်အံ့သြဖွယ် Launcher ကို themes များရာပေါင်းများစွာရှိသည်! သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်ကိုက်ညီသောတင်ပေးသူကိုရွေးချယ်ပါ။
သငျသညျ Android အတွက်ဒီ app Launcher ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်✱, မေ့လျော့မနေပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ!
✱ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ဖုန်းကိုတစ်မူထူးခြားတဲ့ personalization option ကိုပေးစေခြင်းငှါ Black ကအဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကိုဖန်တီးပါတယ်! အသစ်ကစိတ်ကြိုက် features တွေနှင့်အတူ, Black ကအဓိကအကြောင်းအရာ Launcher ကိုသင်အကြိုက်ဆုံး Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအသစ်သောအံ့သြဖွယ်တင်ပေးသူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
ဒီ app ၏ features တွေသုံးပြီးနှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း, install လုပ်ပါ, ဒေါင်းလုပ်များအတွက်အခြေအနေများအထဲကရှာတွေ့မှ Read - https://goo.gl/xUj6gb
ကျနော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားကြပါဘူး။ ကျွန်တော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအရာကိုဒေတာကိုကြည့်ပါကအသုံးပြုသည်ကိုမည်သို့ - https://goo.gl/66xfmf
မလိုအပ်ခဲ့ကြတချို့ခွင့်ပြုချက်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အသေးစား bugfixes အသစ် themes များ။
16.37 ကို MB